कानूनको परिक्षा दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग - चिसेफायू
२०७८ भदौ १३ गते ०९:३९
भाद्र १३,धरान / महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा भैरहेको कानून संकाय पहिलो वर्षको आंशिक बिषयको परिक्षा दिने क्रममा सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
आइतबार बिहान महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको रोड वरपर सरकारी गाडि लिएर परिक्षा दिन सरकारी कर्मचारी आएको भेटिए । भाद्र ११ गतेदेखि शुरु भएको कानून बिषयको दोस्रो दिन भाद्र १३ गते आइतबार contract Law बिषयको परिक्षा थियो । क्याम्पस परिसरमा सरकारी नम्बर प्लेट भएको बा. २ व ६२४७ एउटा मोटरसाइकल,को १ झ ५९७ नम्बरको सेतो रङको गाडी,को १ झ ५१५ को सेतो रङको गाडी,को १ झ ४३८७ नम्बर भएको रातो रङको गाडी र बा. १ झ ९४४१ को सेतो रङको गाडी प्रयोग गरेर परिक्षा दिन आएको भेटिए ।
बा. १ झ ९४४१ का चालकसंग बुझ्दा झापा जिल्लाबाट आएको बताए । चालकले झापा जिल्ला सतासिधाम नगरपालिकाबाट आएको बताए । सतासिधाम नगरपालिकाबाट न्यायीक समितिका अग्नि कार्की परिक्षा दिन आएको बताए ।
कानूनको परिक्षा दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेर कानून उलंघन गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले नै कानूनकै परिक्षा दिन कानुनकै उलंघन गरेको पाइएको छ । सरकारी गाडी दुरुपयोग घटना यो पहिलोपटक भने होइन । सरकारी गाडी विभिन्न प्रयोजनमा पटकपटक दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।